Fenomena toetr'andro - Network Meteorology Network | Web Meteorology (Pejy 2)
Lazainay aminao ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao momba ny orana artifisialy sy ny toetrany. Mianara bebe kokoa momba izany eto.
Lazainay aminao ny zava-nitranga tamin'ny rivo-doza Elpida tany amin'ny faritr'i Gresy, Torkia ary ny faritry ny Ranomasina Égée. Mianara bebe kokoa eto.
Lazainay aminao amin'ny antsipiriany ny zava-drehetra tokony ho fantatrao momba ny trangan'ny toetr'andro Blizzard sy ny toetrany. Mianara bebe kokoa eto.
Tondra-drano any Sina
Lazainay aminao ny fahasimbana goavana nateraky ny tondra-drano tany Shina sy ny paikady entina hamahana izany.
Tafio-drivotra any Atlantika
Holazainay aminao ny anton'ny fitomboan'ny oram-baratra any amin'ny Atlantika sy ny vokany maharitra. Midira izao!
Lazainay aminao amin'ny antsipiriany ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao momba ny radar rivo-doza sy ny toetrany. Mianara bebe kokoa momba izany eto.
Ahoana no niforonan'ny tadio
Ato amin'ity lahatsoratra ity dia manazava tsikelikely ny fomba fiforonan'ny tornado sy ny toetrany. Mianara bebe kokoa eto.
Lazainay aminao amin'ny an-tsipiriany ny fomba namoronana ny rivo-doza Elsa, inona ny toetrany ary inona no fahasimbana naterany.
Lazainay amin'ny antsipiriany aminao ny zava-nitranga rehetra tao amin'ny tafio-drivotra Bárbara sy ny toetrany. Hahafantatra bebe kokoa momba izany eto.
Ahoana ny fomba famoronana taratra
Amin'ity lahatsoratra ity dia holazainay aminao ny fomba famoronana taratra sy ny toetra mampiavaka azy ireo. Hahafantatra bebe kokoa momba izany eto.
Inona ilay oram-panala
Amin'ity lahatsoratra ity dia lazainay aminao ny atao hoe oram-panala ary inona ny mampiavaka azy. Hahafantatra bebe kokoa momba an'ity tranga meteorolojika ity eto.
Anticyclone: ​​toetra sy karazany
Amin'ity lahatsoratra ity dia holazainay aminao amin'ny an-tsipiriany izay rehetra tokony ho fantatrao momba ny atao hoe anticyclone sy ny toetrany.
Baomba mandatsaka orana, ilay trangam-piainan'ny toetr'andro
Ianao ve efa nahita tranga niseho tamin'ny toetrandro toa ny foronina amin'ny siansa? Atorinay anao ny paompy orana sy ny mampiavaka azy.
Lazainay anao amin'ny an-tsipiriany ny zava-drehetra momba ny blowout mafana sy ny fomba fiorenany. Mianara bebe kokoa momba ireo fisehoan-javatra tsy fahita firy amin'ny toetr'andro.
Ny hafanan'ny hafanana dia mamaky firaketana any Espana. Lazainay aminao ny momba azy ireo ary manome torohevitra anao koa izahay mba handehananao tsara amin'io hafanana be io.
Tondra-drano tany Alemana
Amin'ity lahatsoratra ity dia afaka mahita ny vaovao momba ny tondra-drano any Alemana sy ny fahasimbana naterak'izany ianao.
Amin'ity lahatsoratra ity dia hazavainay amin'ny antsipiriany ny atao hoe loza voajanahary, ny antony ary ny karazany isan-karazany.
Pyrocumulonimbus sy onja hafanana any Canada
Lazainay aminao ny fananganana sy ny toetran'ny rahona pyrocumulonimbus niforona nandritra ny hain-trano tany Canada.
Thunder ny maitso
Lazainay aminao ny zavatra rehetra ilainao ho fantatra momba ny tara-pahazavana sy ny mampiavaka azy. Fantaro misimisy kokoa momba an'io tranga mahagaga io.
Lazainay aminao ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao momba ny endrika, ny toetra ary ny fahasimbana nateraky ny tafiotra Fabien.
Amin'ity lahatsoratra ity dia lazainay aminao izay rehetra ilainao ho fantatra momba ny atao hoe tafio-drivotra tropikaly sy ny mampiavaka azy. Hahafantatra bebe kokoa momba izany eto.
Amin'ity lahatsoratra ity dia lazainay aminao ny zavatra rehetra ilainao ho fantatra momba ny mpijery haintany sy ny endriny. Hahafantatra bebe kokoa momba izany eto.
Lazainay aminao hoe inona ireo trangan-javatra iainan'ny atmosfera lehibe mitranga eto amin'ny planetantsika sy ny toetrany.
Lazainay aminao ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao momba ny rivodoza Dorian sy ny antony. Hahafantatra bebe kokoa momba izany eto.
Ny taona tsy misy fahavaratra
Amin'ity lahatsoratra ity dia lazainay aminao izay rehetra ilainao ho fantatra momba ny taona tsy misy fahavaratra sy ny antony. Mianara bebe kokoa momba ny niandohany sy ny vokany.
Amin'ity lahatsoratra ity dia lazainay aminao ny zavatra rehetra ilainao ho fantatra momba ny aody, ny fananganana azy ary ny loza mety hitranga. Mianara bebe kokoa eto.
Amin'ity lahatsoratra ity dia lazainay aminao ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao momba ny Rivo-doza Hagibis sy ny mampiavaka azy. Ianaro ny rivo-doza mahery
Lazainay aminao ny zavatra rehetra ilainao ho fantatra momba ny hafanana sy ny toetrany. Hahafantatra bebe kokoa momba an'io trangan-javatra io eto.
Lazainay aminao ny zavatra rehetra ilainao ho fantatra momba ny tafio-drivotra Miguel sy ny fiforonany. Hahafantatra bebe kokoa momba izany eto.
Lazainay aminao ny zavatra rehetra ilainao ho fantatra momba ny fifandraisana misy eo amin'ny toetr'andro sy ny allergy. Hahafantatra bebe kokoa momba izany eto.
Lazainay aminao ny zavatra rehetra ilainao ho fantatra momba ny fanety sy ny vokatr'izany eo amin'ny fiaramanidina. Ianaro eto izany.
Lazainay aminao ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao momba ny rivodoza Lorenzo, ny niandohany ary ny fifandraisana mety misy amin'ny fiovan'ny toetrandro.
Lazainay aminao ny pitsopitsony rehetra momba ilay tafio-drivotra Gloria izay nijalian'i Espana tamin'ny fiandohan'ny taona 2020. Ianaro ny niaviany sy ny vokany.
Lazainay anao amin'ny antsipiriany ny toetra sy ny maha-zava-dehibe ny haavon'ny tadio Fujita. Fantaro eto daholo.
Lazainay aminao ny zavatra rehetra ilainao ho fantatra momba ny orana orografika sy ny toetrany. Hahafantatra bebe kokoa momba io karazana orana io eto.
Filomena sy oram-panala any Espana 2021
Lazainay aminao ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao momba ny tafio-drivotra Filomena, ny antony ary ny vokany. Mianara bebe kokoa momba ny oram-panala tamin'ny taonjato.
Ianaro daholo ny oram-be convective, ny endriny ary ny mampiavaka azy. Azavainay amin'ny antsipiriany eto izany.
Mafana eo aloha
Lazainay aminao ny zavatra rehetra ilainao ho fantatra momba ny endrika mafana sy ny toetrany ary ny fananganana azy. Hahafantatra bebe kokoa momba izany eto.
Amin'ity lahatsoratra ity dia manazava ny niandohan'ny fako, inona ny vokany sy ny vokany.
Kajy ny haavon'ny lanezy
Lazainay aminao ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao hianarana ny fikajiana ny haavon'ny lanezy. Mianara bebe kokoa momba izay hodinihina.
Amin'ity lahatsoratra ity dia lazainay aminao izay rehetra ilainao ho fantatra momba ny fulgurite sy ny fananany. Mianara bebe kokoa momba an'io fananganana hafahafa io.
Amin'ity lahatsoratra ity dia lazainay aminao izay rehetra ilainao ho fantatra momba ny parhelion sy ny mampiavaka azy. Mianara bebe kokoa momba an'io atmosfera io.
Lazainay aminao ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao momba ny ranomandry, ny mampiavaka azy ary ny vokany. Hahafantatra bebe kokoa momba izany eto.
Lazainay aminao ny zavatra rehetra ilainao ho fantatra momba ny atao hoe tafio-drivotra maina sy ny endrik'izany. Hahafantatra bebe kokoa momba izany eto.
Izahay dia manazava izay rehetra tokony ho fantatrao momba ny karazana taratra isan-karazany misy sy ny mampiavaka azy ireo.
Amin'ity lahatsoratra ity dia lazainay aminao ny zavatra rehetra ilainao ho fantatra momba ny tafiotra fahavaratra sy ny fomba fiorenany. Hahafantatra bebe kokoa momba izany eto.
Lazainay aminao ny fisian'ny oram-be mivatravatra ary ny vokatr'izany. Hahafantatra bebe kokoa momba izany eto.
Lazainay aminao ny toetran'ny fanafody sy ny vokatr'izany. Ianaro daholo ny momba an'io toetr'andro mahery io.
Amin'ity lahatsoratra ity dia holazainay aminao ny fiaviany sy ny angano grika an'ny Ixion ary ny halo masoandro 22º. Fantaro eto ny zava-drehetra.
Amin'ity lahatsoratra ity dia hasehonay anao ireo toetra sy fiavian'i rissagas rehetra. Mianara bebe kokoa momba an'io fisehoan-javatra io.
Amin'ity lahatsoratra ity dia lazainay aminao ny atao hoe tanany, ny fomba famolavolana azy ary ny vokany. Mianara bebe kokoa momba io trangan-toetr'andro tafahoatra io.
Rime dia trangan-javatra meteorolojika izay mamela ravina miavaka. Ianaro eto ny fomba namoronana azy sy ny niandohany.
Amin'ity lahatsoratra ity dia hazavainay amin'ny antsipiriany ny atao hoe fanodinana hafanana sy ny fomba nisehoan'izany. Ianaro hoe inona no ifandraisany amin'ny fandotoana.
Azavainay ny niandohan'ny ony fasika izay niteraka resabe. Tranga hafahafa izany. Jereo eto ny tsiambaratelo.
Amin'ity lahatsoratra ity dia lazainay aminao hoe inona ireo toetra mampiavaka azy ireo, ny fomba famoronana azy ary inona ny vokatr'ireo monsoons. Hahafantatra bebe kokoa momba izany eto.
Amin'ity lahatsoratra ity izahay dia manazava ny atao hoe The blob ary ny fiantraikan'izany amin'ny fiainana an-dranomasina. Hisy vokany ve izany amin'ny ho avy? Jereo eto.
Inona no atao hoe vortex polar
Amin'ity lahatsoratra ity dia ho fantatrao hoe inona ny vortex polar ary inona ny vokany eo amin'ny toetr'andro amin'ilay faritra voakasik'izany. Ianaro eto izany.
Lazainay aminao ny fomba fiasan'ny besinimaro amin'ny rivotra iainana. Fantaro ny karazana mason-drivotra sy ny maha-zava-dehibe izany.
Amin'ity lahatsoratra ity dia afaka mahita fampahalalana amin'ny antsipiriany momba ny brontophobia ianao: tahotra ny varatra sy ny kotrokorana. Ampidiro hahalala ny fomba hamantarana azy.
Amin'ity lahatsoratra ity dia afaka mahita ny tsiambaratelon'ny avana afo ianao. Fantaro ny antony namoronana an'ity tranga mahavariana ity.
Ny handrina tapaka
Amin'ny meteorolojia, ny teny hoe occluded front dia ampiasaina hilazana toetran'ny toetr'andro sasany. Ato amin'ity lahatsoratra ity no hanazavana azy amin'ny antsipiriany.
Azavainay amin'ny antsipiriany ny atao hoe front mangatsiaka sy ny fomba famoronana azy. Midira eto raha hianatra ny momba ny toetra sy ny vokany rehetra. Aza adino izany!
Midira hamaky ity lahatsoratra ity raha te hahalala hoe inona ny havandra ary ahoana ny famoronana azy. Fantaro ny zava-drehetra momba an'io toetr'andro io sy ny vokany.
Divergence sy confgence
Mianara momba ny foto-kevitry ny fampitambatra sy ny divergence amin'ny toetr'andro sy ny lanjan'izy ireo. Eto izahay no manazava aminao ny zava-drehetra.
Azavainay amin'ny antsipiriany ny fanala sy ny fomba fananganana azy. Midira eto raha hianatra ny fizotran'ny fiofanana sy ny vokany.
Ato amin'ity lahatsoratra ity dia afaka mahita ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao momba ny ranonorana. Midira ary mianatra manavaka azy amin'ny tranga hafa.
Ianaro hoe inona ny setroka ary ny mampiavaka azy amin'ny tranga toetr'andro hafa toy ny zavona sy zavona. Fantaro tsara ny zava-drehetra.
Amin'ity lahatsoratra ity dia manazava ny atao hoe zavona sy ny maha samy hafa azy amin'ny zavona. Midira eto raha te hahalala bebe kokoa momba izany.
Amin'ity lahatsoratra ity dia azonao atao ny mianatra ny atao hoe tafio-drivotra, ny toetra mampiavaka azy, ny fomba namoronana azy ary ny karazana misy azy. Aza misalasala miditra hahafantatra bebe kokoa.
Hodinihintsika ato amin'ity lahatsoratra ity ny atao hoe aerolith ary ny mety ho fiaviany sy ny fiorenany. Aza adino io taratra io amin'ity tranga hafahafa ity.
Ianaro daholo ny momba ny lomotra ao amin'ity lahatsoratra ity. Azavainay ny antony namoronana an'ity tranga meteorolojika ity sy ny fomba niterahany ny filokana.
Midira eto ary fantaro ny atao hoe snowdrift ary ahoana ny famoronana azy. Mianara momba ny mahasoa ny lanezy amin'ny andro taloha.
Ny fanala mainty dia tranga iray manimba tanteraka ny voly. Lazainay aminao ny fomba hiarovana ny zavamaniry. Ampidiro ary ianaro ny zava-drehetra momba an'io tranga io.
DANA, famoizam-po mitokana amin'ny haavo avo lenta
DANA (famoizam-po mitokana amin'ny haavo haavo) dia toetr'andro izay miteraka ny rano mangatsiaka ary avy ny orana mivatravatra. Fantaro izany rehetra izany.
Ny orana mangatsiaka dia mitondra oram-be tokoa izay miteraka loza sy fahasimbana any amin'ny tanàna sy tanàna. Ianaro eto ny fomba namoronana azy sy ny antony ilana azy.
Ny polar aurora dia tranga voajanahary mendrika jerena izay mamadika ny lanitra ho maitso. Te hahafantatra ireo toetrany sy ny fomba namoronana azy ve ianao? Midira izao.
Ny oram-baratra dia tadin-javatra mahaliana nefa mampidi-doza tokoa. Ianaro ato daholo ny momba azy ireo.
Inona ny orana fotaka ary ahoana ny famoronana azy?
Ny fandroana fotaka dia tranga iray amin'ny toetr'andro izay mitranga any Espana amin'ny fahavaratra sy fahavaratra. Te hahafantatra ny antony hitrangan'izany ve ianao?
Inona no ary amin'ny fomba ahoana no amoronana cyclogenesis mipoaka
Ianaro ny toetra sy ny fizotran'ny cyclogenesis mipoaka rehetra. Te hahafantatra ny vokany sy ny antony ve ianao?
Trangan-toetr'andro mahery vaika izay hahagaga anao
Atorinay anao ny trangan-javatra meteorolojika mahery vaika izay nitranga teto amin'ny planetantsika sy ny fiatraikany niainany. Te hahafantatra azy ireo ve ianao?
Inona no atao hoe tadio - ary ahoana no hisehoany
Eto ianao dia afaka mahita hoe inona izany, ahoana ny fipoahan'ny tadio-drivotra sy ny vokany lehibe mety hitranga amin'ny tanàna sy ny tendrombohitra.
Inona avy ireo ary ahoana no fananganana tafio-drivotra sy tselatra?
Ity lahatsoratra ity dia miresaka momba ny fananganana oram-baratra sy tselatra ary ny toetrany. Te hahafantatra bebe kokoa momba izany ve ianao?
Ahoana ary rahoviana no hahita ireo Jiro Avaratra any Norvezy
Ity lahatsoratra ity dia miresaka momba ny toetra sy ny fananganana ny Jiro Avaratra ary ny fomba fahitana ireo Jiro Avaratra any Norvezy. Te hianatra momba izany ve ianao?
Ny tondra-drano dia fisehoan-javatra izay mety hiteraka fahasimbana lehibe sy olana amin'ny zanak'olombelona. Fa inona marina ireo ary inona no antony? Midira ary dia holazainay aminao ny zavatra rehetra.
Espana ao ambanin'ny lanezy: ny mari-pana midina -8ºC dia ajanon'ny lalana 60
Tafio-drivotra mangatsiaka sy misy lanezy no namela ny antsasaky ny firenena Espaniola rakotra lanezy sy ranomandry. Làlana hatrany amin'ny 60 no tapaka ary olona an'arivony sisa no tsy manana herinaratra.
Lany rano ny Cape Town noho ny haintany
Ity lahatsoratra ity dia miresaka momba ny haintany lehibe mamely an'i Cape Town, izay mahatonga fa raha tsy mihena ny fihinanana azy dia ho tapitra hatramin'ny 12 aprily.
Ciudadanos dia manolotra ny fanovana ao amin'ny PHN hifanaraka amin'ny fiovan'ny toetr'andro
Ity lahatsoratra ity dia miresaka momba ny fanovana natolotry ny Ciudadanos hanamboarana ny Drafitra Hydrolojika Nasionaly amin'ny fiovan'ny toetr'andro.
Ao anatin'ny roapolo taona mahery, hisy tondra-drano hiseho amin'ny toetr'andro izay mety hisy fiatraikany amin'ny olona 55 tapitrisa.
Ny fahasamihafana eo amin'ny toetr'andro eo amin'i Sydney sy Etazonia
Ity lahatsoratra ity dia miresaka momba ny fahasamihafana tanteraka amin'ny toetrandro eo amin'i Sydney sy Etazonia. Te hahafantatra momba an'io toe-javatra io ve ianao?
Fanentanana natombok'i Mapama hiadiana amin'ny haintany
Ity lahatsoratra ity dia miresaka momba ny fanentanana momba ny haintany natombok'i Mapama. Te hahafantatra ny momba an'io fanentanana io ve ianao?
Ny lanezy any Sahara no voalohany tao anatin'ny 39 taona
Sambany tao anatin'ny 39 taona no nisy oram-panala nilatsaka tany Sahara, tanànan'ny Ain Sefra (Algeria). Midira mba hankafizanao ireo sary mahafinaritra ireo.
Ny orana farany tsy mamaha ny olan'ny haintany
Ity lahatsoratra ity dia mampiseho ny haavon'ny rano fitahirizana ao amin'ny rano Espaniola amin'ny toe-javatra main-tany. Te hahafantatra bebe kokoa ve ianao?
Voakasiky ny haintany ny zaza 120.000 any Maoritania
Tao anatin'izay taona faramparany, nisy haintany lehibe nahazo an'i Maoritania, izay efa misy zaza 120.000 XNUMX tsy ampy sakafo.
Mampivarahontsana ny raharaha haintany any Espana
Amin'ity lahatsoratra ity dia ho hitanao ny toe-javatra misy ireo reservoirs Espaniôla ary ho hitanao ny hamafin'ny haintany iainantsika. Te hahafantatra bebe kokoa ve ianao?
Ny vokatry ny haintany tany Espana
Ny haintany atrehan'i Espana no ratsy indrindra tao anatin'ny 20 taona. Ireo ambaratonga dia ambany noho ny hatramin'izay. Inona no ataonao amin'izany?
Tonga tany Espana ny tafio-drivotra Ana
Ny tafio-drivotra 'Ana' dia tranga iray amin'ny toetr'andro izay nisy fiatraikany tamin'ny saikinosy sy ny Nosy Balearic. Jereo hoe inona ny fahavoazana vokariny sy ny alehany.
Azavainay ny atao hoe tafio-drivotra, ny fomba famolavolana azy sy ny karazany isan-karazany ao mba hahafahanao mianatra bebe kokoa momba an'io toetr'andro io.
VIDEO: NASA mampiseho antsika hoe nanao ahoana ny vanim-potoanan'ny rivodoza 2017
NASA dia namorona horonantsary mahaliana mampiseho ireo rivo-doza lehibe, sy ny fomba nitondran'ny rivotra ny sira anaty ranomasina sy ireo sombintsombiny hafa.
Numa, cyclone atypical, dia miorina eo akaikin'i Gresy sy Sisila
Akaiky an'i Gresy sy Sisila no miforona ny rivodoza mediteraneanina antsoina hoe Numa izay efa namono olona 15. Midira hahalala bebe kokoa.
Tsy misy rano i Espana
Tsy misy rano ny tohodrano any Espana. Ny fiakaran'ny maripana sy ny rotsak'orana dia miantraika amin'ny firenena iray manontolo.
6 amin'ireo fahavaratra 16 maina no niseho tao anatin'ny 10 taona lasa
Ny fanadihadiana nataon'ny Oniversiten'i Zagaroza dia nanambara fa ny 6 amin'ny fahavaratra 16 maina dia niseho tao anatin'ny 10 taona lasa. Noho ny fiovaovan'ny toetr'andro ve?
Inona avy ireo donky misy lanezy ary ahoana no fananganana azy?
Efa nandre momba donat-lanezy ve ianao? Ampidiro ary fantaro ny fomba niforonan'ity tranga meteorolojika mahaliana sy tsy fahita firy ity.
Manakaiky an'i Japon ny rivodoza Lan
Manana kintana vaovao ny vanim-potoanan'ny Pasifika 2017: Typhoon Lan. Manakaiky an'i Japana ity trangan-javatra mahery vaika ity izay mety hiteraka fahavoazana lehibe.
Namely an'i Irlandy androany ny rivo-doza Ophelia namaky firaketana
Tonga any Irlandy anio ny rivodoza Ophelia ary izy koa no lasa rivodoza lehibe voalohany tonga tany Eropa tamin'ny firaketana.
Tafio-drivotra mahery Ophelia dia afaka tonga tany Galicia
Ophelia, tafiotra tropikaly vaovao niforona tany Atlantika, dia afaka namaky an'i Galicia tamin'ny faran'ny herinandro. Lazainay aminao izay rehetra fantatra hatreto.
Las Tablas de Daimiel dia miaina haintany mafy
Efa ny taona maina fahefatra nijalian'ny Valan-javaboary ary samy miharatsy ny harena voajanahary entiny sy ny fifandanjana ara-tontolo iainana.
Ny vanim-potoanan'ny rivodoza 2017, izay mavitrika indrindra mihoatra ny zato taona
Ny vanim-potoana rivodoza 2017 dia mihetsika indrindra: miaraka amin'ny rivodoza sivy, izy no mahery indrindra tato anatin'ny zato taona.
Fahaketrahana tropikaly iray mandrahona ny handrava an'i Costa Rica, Nicaragua ary Honduras
Mampahafantatra anao izahay momba ny fahaketrahana tropikaly iray niforona tamin'ny 4 Oktobra 2017 tany Karaiba, izay mitazona ny mena hatrany Karaiba.
Ny antony mahatonga ny tranga El Niño dia hita
Araka ny fanadihadiana vaovao mifototra amin'ny haavon'ny fahirano sy ny faminaniana avo lenta, ny tranga El Niño dia tokony hojerena.
Ny taona hidrôlialy 2017 dia mihidy miaraka amin'ny tsy fahampian'ny 15%
Ny tsy fahampian'ny rano amin'ity taona ity dia mihidy miaraka amin'ny 15% ambany noho ny tamin'ny taona lasa. Noheverina ho fotoana maina be nanerana an'i Espana izy io.
Rivodoza an-habakabaka, ny fahavalon'ny Tany mangina
Efa naheno rivo-doza ve ianao? Ireo dia fisehoan-javatra izay mety hisy vokany lehibe eo amin'ny tany. Fantaro ny fomba namoronana azy ireo.
Ireo ala manana biodiversité betsaka kokoa dia mahatohitra tsara kokoa ny haintany
Ny biodiversité ny tontolo iainana dia ilaina amin'ny fanoherana ny karazana fiantraikan'ny tontolo iainana. Te hahafantatra ny antony ianao?
Hitanay ny fahavoazana lehibe mety hitranga rehefa mitranga ny tsunami. Fantatsika ve ny fomba namoronana azy ireo sy ny zavatra tokony hatao raha misy fampitandremana tsunami?
Ny tranga La Niña
Misy koa tranga mifanohitra fantatra amin'ny anarana hoe La Niña. Mamokatra fiovana lehibe eo amin'ny toetr'andro sy ny vokany ary zava-dehibe ny vokany.
Puerto Rico sy ny Nosy Virgin, potika tanteraka taorian'ny fandalovan'ny rivodoza Maria
Ny rivo-doza Maria dia niteraka fahasimbana betsaka tany Karaiba, indrindra ny any Puerto Rico sy ny Nosy Virgin, izay potika tanteraka.
Ny fanadihadiana iray dia manamafy ny fitomboan'ny rotsakorana amin'ny endrika havandra
Navoaka tao amin'ny diary Atmospheric Research ny fandinihana ary nandalina ireo firaketana havandra nanomboka ny 1948 ka hatramin'ny 2015. Inona ny valiny azonao?
Fa maninona no be ny tafio-drivotra an-dranomasina izay misy ny fifamoivoizana an-dranomasina bebe kokoa?
. Ireo tafio-drivotra izay miorina mivantana amin'ny làlan-tsambo roa be mpandeha indrindra eto an-tany dia mahery vaika kokoa.
Tonga amin'ny sokajy farany ambony ny rivodoza Maria ary nandrava ny nosy Dominica
Izahay dia manao tatitra momba ny Rivo-doza Maria, izay mandrahona ny nosy Karaiba andro vitsivitsy monja taorian'ny nahavoa an'i Irma.
Io ve no endrika ratsy indrindra amin'ny fiovan'ny toetrandro?
Ireo no vokatry ny fiovaovan'ny toetrandro izay miandry antsika amin'ny ho avy, mihombo marika sy mihamafy hatrany. Io ve no endrika ratsy indrindra amin'ny fiovan'ny toetrandro?
Ny toetra sy ny haben'ny rivodoza María
Nanomboka tamin'ny tafiotra tropikaly ny rivodoza María, fa ny alahady teo dia lasa rivodoza izy, ary nahatratra 120 km / ora ny rivotra.
Taorian'i Harvey, sy Irma, tonga izao i Maria, rivo-doza hafa
Tafio-drivotra mahery María, izay nahatratra ora vitsivitsy ny sokajy rivodoza, mandrahona ireo faritra namely ny fandalovan'ny rivodoza Irma
Ny fahatongavan'i Typhoon Talim tany Japon dia nanery ny famindrana olona mihoatra ny 600
Tonga tany Japon ny rivodoza Talim, firenena iray izay ampandrenesin'ny oram-be sy ny rivotra mahery ny tapany atsimo.
Ny tombony azo amin'ny natiora entin'ny rivodoza
Ahoana ny fahafahan'ny rivo-doza mitondra tombontsoa marobe amin'ny planeta, ary miasa ho toy ny rafitra mifehy ny zava-drehetra manomboka amin'ny maripana ka hatramin'ny tontolo iainana.
Nanova ny lokon'ny Nosy Virgin ny rivodoza Irma
Ny Nosy Virgin, miavaka amin'ny rakotry ny zavamaniry tropikaly, dia very ny lokony maintso taorian'ny nandravan'ilay rivodoza Irma azy.
Ny rivodoza Irma dia manohy mandroso mankany Florida Avaratra, ny sokajy misy azy dia nidina ho 1
Ny rivo-doza Irma dia eo afovoan'ny fandalovany mamaky an'i Florida. Nilatsaka ny rivotra ary inoana fa hitohy hatrany izany. Mamela fandringanana goavambe izy
Ny rivodoza Irma, ilay matanjaka indrindra amin'ny tantara any Atlantika, dia miteraka fahasimbana lehibe
Ny rivodoza Irma, ankehitriny ny rivodoza lehibe indrindra noforonina tao amin'ny Ranomasimbe Atlantika, dia manakaiky ny faritra be mponina. Misy ny fanamarihana ny famoahana faobe.
Inona no tsy mampitovy ny rivo-doza sy ny tadio
Jereo ny fahasamihafana misy eo amin'ny rivo-doza sy ny tadio, ny fombany sy ny toetran'ny tsirairay. Iza no atahorana kokoa?
Irma, ilay rivodoza lehibe vaovao mankamin'ny Karaiba
Rivo-doza vaovao, vita batemy amin'ny anarana Irma, no mankany Karaiba. Mandeha avy amin'ny tafio-drivotra tropikaly mankany amin'ny tafio-drivotra sokajy faha-3 ao anatin'ny iray andro monja.
Ny fitahirizam-bokin'i Mansilla dia mamela tanàna iray voasaron'ny haintany
Noho ny haintany sy ny haavon'ny rano dia afaka namakivaky ilay tanàna nipoitra izao ny Mansillans.
Ny vokatr'ilay rivodoza Harvey
Ny vokatry ny Harvey sy ny tondra-drano lehibe navelany teo am-piandrandrany. Ny fanampiana sy ny fitaovana rehetra natolotra hanarenana ny faritra malalaka
Elaela sy maharitra kokoa ny fanarenana ny tontolo iainana aorian'ny haintany
Misy fandinihana vaovao izay manondro fa ny ekosistia terrestrial dia mila fotoana elaela vao tafarina amin'ny haintany farany teo noho ny tamin'ny taonjato faha-XNUMX.
Harvey dia afaka namely an'i Texas amin'ity zoma ity ho rivodoza
Antenaina fa amin'ity zoma ity ny fahaketrahan'ny tropikaly Harvey, dia afaka mahatratra ny morontsirak'i State of Texas ho rivodoza. Navoaka ny taratasy fanaraha-maso.
Ny maripana ambony mamely amin'ity herinandro ity dia saika nampidi-doza be ny firenena iray manontolo, noho ny loza ateraky ny afo.
Ny fahafantarana ny fahasamihafana sy ny fomba hitrangan'ny hafanana na ny hafanana mamely amin'ny fahavaratra dia tena ilaina, mba hiarovana ny tenantsika sy hialana amin'ny faharatsiana lehibe kokoa.
I Espana dia iray amin'ireo firenena izay mihetsiketsika matetika sy matetika kokoa ny onja hafanana. Inona no azontsika atao amin'izany?
Inona ireo rivo-doza maitso?
Efa nandre oram-baratra maitso ve ianao? Ampidiro ary holazainay hoe inona izy ireo ary ny fomba namoronana ireo trangan-javatra nahagaga ny toetr'andro ireo.
Horohoron-tany roa mahery no nampihozongozona an'i Chine afovoany sy avaratra andrefana
Horohoron-tany roa mahery no nampihozongozona an'i Shina tao anatin'ny 24 ora latsaka kely, niaraka tamin'ny horohoron-tany 120 mahery. Manampy hatrany ireo faritra ireo sampandraharaha mpamonjy voina.
Ny onja hafanana mamely an'i Eropa tato ho ato, antsoina hoe Lucifer, dia manalefaka ny lanezy eny an-tendrombohitra Alpes Italiana.
Rivo-doza tropikaly Franklin dia mety ho lasa rivodoza ao anatin'ny ora vitsivitsy
Rivo-doza tropikaly Franklin, izay efa namely ny saikinosy Yucatan, dia hiverina an-tanety indray, azo inoana fa rivodoza.
Mitsonika an'i Mallorca ny hafanana
Ny andro farany amin'ny volana Jolay sy ny voalohan'ny volana aogositra dia mafana indrindra ao amin'ny nosy Mallorca, miaraka amin'ny mari-pana hatramin'ny 41ºC.
Ny karazana biby tsirairay dia mizaka ny vokany manokana amin'ny hafanana ambony. Voakasik'izany ny fiatraikany metabolika sy ny fiterahana.
Shanghai, Sina, dia niaritra ny onjan'ny hafanana ratsy indrindra hatramin'ny nanombohan'ny firaketana, 145 taona lasa izay. Tena nampivadi-po tokoa ka olona efatra no maty.
Ny fanarahana ny fifanarahana tany Paris dia tsy hisakana ny tranga El Niño
Na dia tratra aza ny tanjon'ny fifanarahana tany Paris, dia tsy hampiorina ny El Niño izany. Te hahafantatra bebe kokoa momba ny vokatry ny El Niño ianao?
Amin'ny mari-pana avo kokoa, mety maty kokoa. Tsy noho ny hafanana ihany, fa noho ny faharetany amin'ny andro. Miteraka fahasimbana ara-batana sy ara-tsaina izany.
Inona ny onja hafanana ary inona no vokatr'izany? Raha te hahalala ny zava-drehetra momba an'io tranga voajanahary io ianao dia aza misalasala miditra.
Inona ny tranga El Nino?
Azavainay ny atao hoe El Niño, ary inona no vokany. Ho fanampin'izay, holazainay aminao raha misy ifandraisany amin'ny fiovan'ny toetrandro. Aza adino izany.
Firaketana ny maripana ara-tantara vaovao any Espana
Herinandron'ny firaketana ny mari-pana ara-tantara mitohy manerana ny firenena. Na amin'ny sehatra fanjakana na amin'ny faritra samihafa.
Inona no vokatry ny foehn?
Tranga iray mitranga izany rehefa misy rivotra mandomando be dia be no terena hiakatra an-tendrombohitra. Te hahafantatra ny effet foehn ve ianao?
HYPERCAN: Ilay rivodoza mahery indrindra mety misy!
Hypercan, na ny fomba fandalovan'ny rivodoza mahery mizaka ny Baiboly amin'ny toetrandro. Na dia tsy misy firaketana aza dia fantatra fa indray andro any mety hitranga izy ireo.
Inona no atao hoe rivo-doza?
Te hahafantatra ny atao hoe rivodoza ve ianao? Vahanay ny fisalasalanao momba ny trangan-javatra iray izay mety hiteraka fahavoazana lehibe ary hitondra tombontsoa maro mandritra ny fiainana.
Ny kere any Kenya dia efa loza voajanahary
Efa misy Keniana telo tapitrisa sy sasany mila fanampiana amin'ny maha-olona noho ny haintany mafy mamely ny firenena.
Ny fahavaratra dia manomboka any Espana miaraka amin'ireo fitahirizam-bokatra manana fahaizana 53%
Nanomboka ny fahavaratra izahay tamin'ny reservoirs tamin'ny 53% amin'ny fahafahany feno. Mifanitsy amin'ny 20% eo ambanin'izay nananantsika tamin'ny 2007 io.
Ny mari-pana sy ny haintany avo dia matetika
Amin'ny fahavaratra izao, miaraka amin'ny fiakaran'ny maripana sy ny fihenan'ny rotsakorana, manomboka ny vanin-taona maina.
Ho lasa matetika kokoa ny onja hafanana mahafaty
Ny onja hafanana mahery vaika dia miha matetika noho ny fiovan'ny toetr'andro, nefa tsy misy ny zavatra atao mba hampihenana ny gazy miteraka izany.
Ny onja hafanana voalohany any Espana dia mampitandrina ny faritany 34
Mena mafana i Espana, farafaharatsiny hatramin'ny alatsinainy. Ny onja hafanana voalohany dia mametraka faritany 34 any amin'ny faritany, izay ahatratra ny maripana hatramin'ny 42ºC.
Supercells, fahitana ny natiora nalaina tamin'ny horonan-tsary
Supercells. Maherin'ny 160000 kilometatra eny an-dalana, fakantsary fakantsary an'aliny. Chad Cowan dia mampiseho fizahan-toetra voajanahary tena izy
Fantaro eto hoe inona ireo loko 7 amin'ny avana. Ahoana no fiforonan'ny avana? Lazainay aminao ny momba ity trangan-javatra meteorolojika ity?
Tselatra na jiro globular, tranga tsy dia fahita firy
Inona ny tara-pahazavana na alikaola? Vahanay ny fisalasalanao mba hahafantaranao zavatra bebe kokoa momba ny iray amin'ireo trangan-javatra hafahafa hafahafa indrindra.
Mety misy tranga El Niño amin'ny tapany faharoa amin'ny taona
Na eo aza ny fitoniana izay ananana amin'ity taona 2017 ity, ny WMO dia tsy manilika ny 100% mety mbola hivoaran'ny El Niño
Misy fiatraikany amin'ny tanàna mihoatra ny ambanivohitra ny fiovan'ny toetrandro
Ny fiovan'ny toetrandro dia misy fiatraikan'ny fiakaran'ny maripana, fa io fiakarana io dia tsy hitovy amin'ny toerana rehetra.
'Arlene' dia niforona 40 andro talohan'ny nanombohan'ny vanim-potoanan'ny rivo-doza
Ny vanim-potoanan'ny rivo-doza, na dia tsy manomboka amin'ny fomba ofisialy hatramin'ny 1 Jona aza, dia efa manana mpilalao fototra: 'Arlene', izay niforona 40 andro talohan'izay.
Mandrahona ny hamafa ny loharanon'ny rano eto amintsika ny fiovan'ny toetrandro
Ny fiantraikan'ny fiovan'ny toetrandro any amin'ny lovia espaniola dia mety ho lehibe kokoa noho ireo voatanisa ao amin'ny drafitra Hydrological
Ny rivodoza Katrina, iray amin'ireo manimba indrindra tamin'ny tantarantsika farany teo
Ny rivodoza Katrina dia iray amin'ireo maty indrindra tamin'ny tantarantsika farany teo. Namono olona 1833 XNUMX, ary niteraka fahasimbana lehibe tany Etazonia.
Drafitra fanampiana ho an'ny haintany any Bolivia
Ny haintany mitranga any Bolivia no mafy indrindra tato anatin'ny 25 taona. Inona ny tetikasa misy hanamaivanana ny olan'ny haintany?
Ny haintany any Somalia dia mampihena ny sakafo ary miteraka fahafatesana
Any Somalia, olona 196 eo ho eo no maty noho ny haintany nihaona tamin'ity taona ity noho ny tsy fisian'ny rano sy aretina.
Somalia dia nanambara ny fanjakan'ny firenena noho ny haintany
Somalia dia nanambara ny fanairana noho ny haintany mamely ny tany.
Inona no mahasamihafa ny kotroka sy ny tselatra ary ny tselatra
Mampientanentana tampoka voajanahary ny tafiotra, fa fantatrao ve ny mahasamihafa ny kotroka sy ny tselatra ary ny tselatra? Ampidiro dia hanampy anao hahafantatra azy ireo izahay.
Ny fisehoan'ny "La Niña" dia hitazona toe-javatra tsy miandany amin'ny fiandohan'ny taona 2017
Ny mety hitohizan'ny toe-piainana tsy miandany na dia amin'ny tranga "La Niña" aza dia 70-85 isan-jato.
Ny onja hafanana mahery setra any Aostralia dia mamono ramanavy rehefa matory
Ny onja mahery setra mamely an'i Aostralia dia namono ny ramanavy manidina aostralianina natory.
Misy amboahaolo mangatsiaka any Alemana noho ny onja mangatsiaka
Iray amin'ireo sary miely indrindra amin'ny Internet ny sarin'ilay amboahaolo mangatsiaka hita tao amin'ny renirano Danube.
Misafotofoto teny ve isika rehefa misy tampoka mangatsiaka?
Meteoroology dia mampiasa jargon sasany izay mety tsy azontsika tsara. Inona ireo teny ampiasaina amin'ny ody mangatsiaka ary inona no mahasavoritaka antsika?
Inona ny cyclones
Inona ny cyclones ary inona ny karazana ao? Fantatrao ve ny fahasamihafana misy eo amin'ny siklon-polar, cyclone subtropika ary rivodoza? eto no hanazavana ny tsiambaratelony rehetra
Ny antsipirian'ny onja mangatsiaka Siberia izay mamely an'i Espana
Ny onja mangatsiaka any Siberia izay iainantsika dia tonga amin'ny toerana avo indrindra manerana an'i Espana. Andao hojerentsika ny antsipiriany.
Inona no atao hoe snap mangatsiaka?
Ny onja mangatsiaka dia fisehoan-javatra mampihena ny maripana ao anatin'ny 24 ora. Avy aiza anefa izy ireo? Midira ary fantaro.
Onja mangatsiaka any Espana: ny hatsiaka mamirifiry sy ny lanezy any avaratra sy avaratra atsinanan'ny firenena
Ny onja mangatsiaka any Espana dia misoratra anarana ny mari-pana ambanin'ny zero, miaraka amin'ny fanala hatramin'ny -13ºC ary ny rivotra mahery hatramin'ny 80km / ora.
Ny orana sy ny rivotra izay mamely ny atsimo atsinanana amin'ny Saikinosy Iberia sy ny Nosy Balearic dia miteraka fahasimbana marobe.
Ny loza voajanahary ratsy indrindra tamin'ny 2016
Hodinihintsika ny loza voajanahary ratsy indrindra nitranga tamin'ny 2016: rivo-doza, horohoron-tany ary tondra-drano izay niteraka fahasimbana lehibe.
Ny loza ateraky ny tondra-drano dia mihombo noho ny fiovan'ny toetr'andro. Izany no antony ametrahan'ny governemanta fanovana eo amin'ny lalàna.
Firy ny rivo-doza niforona tamin'ny 2016?
Nafana dia mafy ny vanim-potoanan'ny rivodoza Atlantika 2016, ka rivo-doza 7 no niteraka fahavoazana sy fatiantoka ny ankamaroan'ny rivodoza.
Raha jerena ny vinavinan'ny toetrandro natao tato ho ato, dia faritany iraika ambin'ny folo Espaniola no nampitandremana tamin'ny oram-be sy ny oram-baratra.
Fantson-drano mahavariana any amin'ny morontsirak'i Valencia
Ny oram-baratra tany Valencia dia tsy namela ny tondra-drano fotsiny, fa niaraka ihany koa ny ony miavaka.
Ny rivodoza Otto namely an'i Amerika afovoany
Tonga tany Amerika Afovoany ny rivodoza Otto, izay namoizany olona 3 maty tany Panama, ankoatry ny evacuees maherin'ny 10 sy fahasimbana lehibe.
Argos, tafio-drivotra voalohany nanala an'i Etazonia
Hatramin'ny zoma lasa teo, ny rivo-doza Argos dia namela ny antsasaky ny tapany avaratr'i Etazonia rakotra lanezy sy ranomandry.
Inona ireo tadio izay nandrava indrindra teo amin'ny tantara?
Te hahafantatra ve ianao hoe inona ireo tadio mahery indrindra teo amin'ny tantara? Raha eny dia miditra ianao ary jereo ny laharana.
Ahoana ny fisian'ny tsunami
Iray amin'ireo trangan-javatra manimba indrindra hitanay eto an-tany izany, saingy fantatrao ve ny fomba hisian'ny tsunami? Mandrosoa dia holazainay aminao izany.
Aiza ianao no azo antoka indrindra amin'ny fitokonana varatra?
Torohevitra fototra sasany hialana amin'ny "fisarihana" ireo tara-pahazavana sy ny fahafahantsika tsy ho voamariky satria ao anatin'ireo toe-javatra ireo dia tsy te-ho mpiorim-paka isika.
Misy phobias amin'ny toetrandro
Misy ny isan-jaton'ny mponina izay miseho karazana tahotra na fampihorohoroana manoloana ny trangan-javatra meteorolojika sasany. Antsoina hoe phobias meteorolojika izy ireo.
La Niña dia mety ho nalemy tamin'ny volana ho avy
Notaterina fa misy 50% ka hatramin'ny 65% ​​ny vinavinan'ny La Niña mandritra ny telovolana farany sy telo volana voalohany amin'ny 2017.
Iza no manapa-kevitra ny anaran'ny rivo-doza?
Efa mba nanontany tena ve ianao hoe iza no manapa-kevitra ny anaran'ny rivo-doza sy ny antony niantsoana azy ireo? Midira raha te hahalala ny antony ananan'izy ireo ny anarany.
Maninona no tsy misy rivodoza any Espana
Ankehitriny ny rivodoza Matthew no mamely ny farany, hamaly ny fanontaniako aho hoe maninona no tsy misy rivodoza any Espana.
Ny tombotsoan'ny rivodoza
Izy ireo dia fisehoan-javatra izay mety hiteraka fahasimbana lehibe, nefa koa tena mahasoa. Jereo hoe inona ny tombotsoan'ny rivo-doza.
Firaketana 5 napetraky ny Rivo-doza Matthew
Aza adino ny antsipiriany ary soraty ireo rakitsoratra 5 fa nisy rivodoza nanimba sy nampidi-doza toa an'i Matthew nahavita namaky.
Inona avy ireo karazana tadio?
Na dia mitovy aza ny endrik'izy ireo, dia misy karazana tadio: Midira mba hahitana ny fahasamihafana misy azy ireo sy ny firafitra tsy raisina ho tadio.
Ahoana ny fomba hisian'ny tafio-drivotra
Hilaza aminao izahay ny amin'ny fomba hisian'ny tafio-drivotra, tranga iray amin'ny toetr'andro manarona ny lanitra amin'ny rahona ary matetika mitondra orana.
Ny tsy fitovizan'ny rivo-doza, ny rivodoza ary ny rivo-doza
Diniho tsara ny fahasamihafana misy eo amin'ireo trangan-javatra fantatry ny besinimaro toy ny rivo-doza, rivodoza ary rivodoza.
Nicole, ilay tafiotra tropikaly efatra ambin'ny folo niforona tany Atlantika
Niforona omaly i Nicole, ny tafio-drivotra tropika faha-XNUMX tamin'ny vanim-potoana rivodoza Atlantika izay, hatreto, dia tsy niteraka fahasimbana.
Tafio-drivotra sokajy faha-2 i Matthew tafio-drivotra
Tafio-drivotra tropikaly Matthew, izay niforona tamin'ny 28 septambra, dia lasa rivodoza sokajy faha-2, misy fiatraikany amin'ny Lesser Antilles.
Afaka miforona ve ny tadio any Espana?
Ny rivodoza dia tranga tsy fahita firy any amin'ny faritany espaniola, fa ny vaovao mahafaly dia mety hisy tadion-tsambo any Espana. Miditra.
Inona ny haintany ary inona no vokany?
Lazainay aminao ny atao hoe haintany, tranga iray izay mety hisy vokany lehibe eo amin'ny fiainan'ilay faritra voadona iray manontolo.
Ny fiatraikan'ny fiovan'ny toetr'andro amin'ny haintany dia kely noho ny nandrasana
Araka ny fikarohana vaovao, ny fiovan'ny toetr'andro dia tsy hisy akony firy amin'ny haintany noho ny nandrasana. Lazainay aminao ny antony.
Rivo-doza sy rivodoza manimba indrindra tato anatin'ny taona vitsivitsy
Ankehitriny satria vanim-potoana ny rivodoza sy ny rivodoza, dia hasehoko anao ireo izay nidina an-tantara tato ho ato noho ny heriny manimba.
Ny onja hafanana amin'ny volana septambra, tranga tsy mahazatra
Miaina onja hafanana hafahafa any Espana isika amin'izao fotoana izao. Suhu hatramin'ny 42ºC izay manakana antsika tsy hamarana ara-dalàna ny fahavaratra. Fa inona izany?
Ny onja hafanana ratsy indrindra any Espana
Te hahafantatra ve ianao hoe inona ny onjan'ny hafanana ratsy indrindra tany Espana? Midira raha te hahita ny andro ratsy indrindra amin'ny fahavaratra niainan'ny firenena.
Mamono renirano 323 any Norvezy ny tselatra
Tany Norvezy, zavatra tsy mahazatra no niseho: fitokonana varatra no namonoana renindry 323 tao amin'ny valan-javaboary iray. Mampino marina? Midira hahalala bebe kokoa.
Mihamafy ny rivodoza Gastón any Atlantika, hahatratra an'i Espana ve izy?
Ny rivodoza Gastón, ny mahery indrindra amin'ny vanim-potoana rivodoza Atlantika, dia nihahery. Ho tonga any Espana ve izy io? Hilaza aminao izahay.
Inona ny tranga toetr'andro amin'ny gale
Aza adino ny antsipiriany ary mariho tsara ny toetra mampiavaka ny toetr'andro toy ny gale.
Fanafihana ny kalalao any New York amin'ny alàlan'ny hafanana
New York City dia notafihan'ny kalalao amerikana, ary ny hafanana sy ny hamandoana avo no mampandeha ireo bibikely ireo.
Curiosities 3 momba ny Jiro Avaratra
Aza adino ny antsipiriany ary manamarika tsara ny curiosities 3 izay tokony ho fantatrao momba ireo hazavana Avaratra mahatalanjona.
NOAA dia manantena vanim-potoana rivodoza mahery kokoa any Atlantika
Hanao ahoana ny vanim-potoanan'ny rivodoza Atlantika? Araka ny NOAA, antenaina fa ho mavitrika kokoa noho ny mahazatra. Midira hahalala bebe kokoa.
Vokatry ny fisehoan-javatra La Niña
Midira raha te hahalala hoe inona ny vokatr'ilay tranga La Niña, ary aiza no toerana misy fiantraikany indrindra amin'izany. Aza adino izany.
Curiosities 6 momba ny rivo-doza izay hahagaga anao
Mieritreritra ve ianao fa mahalala ny zava-drehetra momba ny siklon tropikaly? Midira ary holazainay aminao ny curiosities 6 momba ny rivo-doza izay hahagaga anao tokoa.
Ahoana no fananganana fantson-drano?
Ireo fantson-drano na farantsondrano dia trangan-javatra tsy fahita firy amin'ny toetr'andro izay avy amin'ny ranomasina. Midira mba hahitana ny fomba namoronana azy ireo.
Inona ny onja-hafanana ratsy indrindra any Espana?
Mariho tsara ary aza adino ny antsipirihany momba ny onja hafanana ratsy indrindra nosedraina sy niaretany tamin'ny tantarany rehetra.
Fa maninona no manorana ny fotaka?
Nifoha feno loto ve ny fiaranao? Matetika dia tranga iray miseho farafahakeliny indray mandeha isan-taona. Fantaro ny antony mandatsahan'ny orana fotaka.
Trangan-javatra tsy fahita firy amin'ny toetr'andro
Te hahita ny tranga tsy fahita firy amin'ny toetr'andro ve ianao? Raha eny dia tonga amin'ny toerana mety ianao. Midira ho ary gaga.
Inona no atao hoe heatwave
Tonga tany Espana manontolo ny onja hafanana voalohany ary niseho ny hafanana ka nahatonga ny hafanana nihoatra ny 40 degre.
Izy ireo dia sasany amin'ireo tranga mahatalanjona indrindra, saingy haintsika daholo ve ny momba azy ireo? Ampidiro dia holazainay aminao ny te hahafanta-javatra 4 momba ny tadion-tadio izay hahagaga anao.
Ankehitriny i Espaina dia mijaly amin'ny hafanana ambony, fotoana mety izao hamaliana ny fanontaniana hoe maninona no mitranga ny hafanana.
Curiosities 3 momba ny tafio-drivotra
Lazainay aminao ireo te hahafanta-javatra mahaliana 3 momba ny tafiotra, ireo trangan-javatra meteorolojika izay manazava ny lanitra ary manaitra anay tokoa.
Inona avy ireo trangan-javatra mahatsiravina?
Ny fisehoan-javatra mahatsiravina amin'ny toetr'andro dia ireo izay, noho ny hamafiny, dia miteraka na mety miteraka fahasimbana lehibe amin'ny mponina. Fantaro hoe iza izy ireo.
Inona ilay oram-panala mavokely
Aza adino ny antsipiriany ary manamarika tsara hoe inona ilay fisehoan-javatra hafahafa amin'ny lanezy mavokely izay matetika mitranga amin'ny faritra sasany eto amin'izao tontolo izao.
Inona ny terral?
Te hahafantatra ny atao hoe Terral, ilay rivotra mafana mafana mampiavaka azy ve ianao? Midira hahalalana ny mekanin'ny Rivotra Katabatic.
Inona ny tranga La Niña?
Hitranga ny fisehoan-javatra La Niña amin'ity taona ity ary tsy tsara ny vinavina satria hitovy amin'ny fiatraikany El Niño.
Roa andro lasa izay ny faritanin'i Malaga iray manontolo dia niaritra ilay tranga antsoina hoe mini-gale izay mahazatra ny faritra Cantabrian.
Ny vanim-potoana rivodoza Atlantika dia hanana hetsika antonony
Ny vanim-potoanan'ny rivo-doza any Atlantika dia hanana hetsika antonony, miaraka amin'ny rivodoza dimy, ny roa amin'izy ireo dia tena mahery. Midira hahalala bebe kokoa.
Inona no atao hoe hydrometeor ary inona avy ireo karazana lehibe?
Te hahafantatra ny atao hoe hydrometeor ve ianao? Raha izany dia aza misalasala ary midira. Izahay koa hilaza aminao ireo karazana lehibe izay misy. Ianao ve sa ho resy?
Inona ny fitsangatsanganan'ny tafio-drivotra ary nahoana isika no tokony hiahiahy?
Efa mba naheno ve ianao fa nisy tafio-drivotra? Fomba fisehoan-javatra tsy takatry ny saina sy mampidi-doza izy ireo, afaka miteraka olana maro. Miditra.
Ny tafio-drivotra fasika sy vovoka dia fisehoan-javatra tena mampiavaka izay mitranga any amin'ny faritra maina sy tsy dia maina manerantany, indrindra ny any Sahara.
Brinicle na rantsantanan'ny fahafatesana, ny siklon-dranomasina
Ilay brinicle, fantatra koa amin'ny rantsan-tànana na sandrin'ny fahafatesany, dia siklone an-dranomasina miforona any amin'ny ranomasina akaikin'ny andry. Fantaro ny fomba namoronana azy.
Ny tanjaky ny El Niño »Godzilla»
El Niño dia trangan-javatra toetr'andro voajanahary mifandraika amin'ny fiakaran'ny hafanan'ny Atlantika. Na izany aza, ny ankehitriny dia hanimba.
Ny toerana tsara indrindra eto ambonin'ny planeta hijerena ny Jiro Avaratra
Jereo ny toerana tsara indrindra manodidina ny planeta hahitanao Jiro Avaratra ary hankafizanao ny trangan-toetrandro mahafinaritra indrindra eto an-tany.